Uninzi lweShishini le-SEO libuyele umva | Martech Zone
Uninzi lweShishini le-SEO libuyele umva
NgoLwesibini, Aprili 3, 2012 NgoMvulo, Juni 10, 2013 Douglas Karr
Ndiphulaphule i-webinar ngoku ngoku UkuSebenza kweeNjini zoPhando (SEO) kwaye yandicaphukisa. Imetrikhi yokuqala exoxwa kwi-webinar yingxoxo ye zingaphi izixhumanisi Isicwangciso esivelisiweyo, kunye ivolumu yamagama aphambili ezazithunyelwe kwisicwangciso.
Akukho ngxoxo guquka. Akukho ngxoxo ukubaluleka. Akukho ngxoxo abaphulaphuli. Akukho ngxoxo Ukukhuthazwa. Ingxoxo yindlela onokuthi ulahle ngayo izinto ngaphandle phaya kwaye uzame ukufumana amakhonkco amaninzi kangangoko unakho nakwesiphi na isibonelelo ukuqhuba isikhundla kumagama aphambili okhuphiswano. Kutheni ungabhali nje i-logo yakho kwi-butt yomntu kwaye uyilahle kwi-Youtube? Uya kufumana ukugcwala kwabantu abaninzi ngokungafanelekanga ngaloo ndlela, nawe… kwaye iya kuba neendleko ezingaphantsi.
Sifikile ukuza kuthi ga ngoku kwintengiso yedijithali kodwa sihlala sibuyela kumaqhinga okuqhekeka. Isicwangciso esidala se ngaphezulu kwamehlo Iyaqhubeka nokukhathaza abathengisi. Intsomi kukuba kufanelekile ukuba utsale wonke umntu kwindawo yakho… kwaye nakwelo qela uyakufumana umntu. Ngokuphindaphindiweyo sibona isicwangciso sisilela, ukanti abathengisi phantse bahlala bebuyele kuso. Ii-eyeballs ezininzi ziyafana kunye neshishini elininzi.
Akuyonyani. Kwaye kutheni iinkampani kufuneka zityalomali kuzo Ukuthengisa ngaphakathi kwi-SEO.
Ndisamangalisiwe linani labantu abazithengisela iingcali ze-SEO kodwa bengakhathali nokuba zindwendwe ezikwi-Intanethi njani aguqulwa abaxumi. Phambi kokuba bathethe nomthengi, bajonge iireyithingi, yiya ufumane onke amagama aphambili evolumu, kwaye ubaphose isicatshulwa esinexabiso malunga nendlela abaza kuyihlasela ngayo. Yindlela eyoyikekayo kwaye ibuye umva ngokupheleleyo.
Ukuba uluhlobo olwenziweyo kwi-intanethi, wena sele unedatha apho ishishini lakho livela kwi-intanethi. Qaphela anditshongo iphi eyakho zendlela ivela. ndithe iphi eyakho ishishini ivela. Oko kuthetha ukuba uphononongo lwakho kubahlalutyi yeminyhadala, iinjongo kunye notshintsho olukhokelela kwinto yakho kwaye uyiqhubele ekubeni ngumthengi.
Uninzi lwezithuthi ozifumanayo alukho kwelo candelo… ke kutheni ungakhathala ukuba utyelelo ngakumbi kubakhenkethi abangasokuze benze shishini nawe? Ngokuqinisekileyo, abanye baba bantu baya kwabelana ngolwazi lwakho nabanye abantu-yinto entle leyo. Kodwa oko kwenzeka kuphela xa wabelana Umxholo ofanelekileyo nabaphulaphuli abafanelekileyo.
Ukuba usebenza ngokusebenza kweinjini yokukhangela, kufuneka uqale ngokuchonga amagama aphambili aqhuba iziphumo… emva koko sebenza umva. Ngaba unesikhundla esiphakathi kumagama aphambili ahambelana nokuqhuba ukuthengisa kwakho? Qala ngokwandisa loo maphepha kulawo magama aphambili ukuze intengiso yakho inyuke. Ngokwesiqhelo, le yimisila emide kwaye akukho nzima ukuyisebenza.
Ngoku uya kuqhuba iziphumo zeshishini endaweni yeebhokhwe zamehlo kwaye iinzame zakho ze-SEO ziya kuhlawula.
Izinto ezi-5 zesindululo seNtengiso esiPhumeleleyo
I-Anatomy yokuHamba kwintsholongwane
Epreli 4, 2012 ngo-5: 07 AM
Ngokombono wam, eyona ndlela yokuchonga amagama angundoqo aya kuqhuba iziphumo kwi-seo, kukuqala ngephulo elincinci le-adwords lika-google ukuvavanya ukusebenza kwamagama angundoqo kunye nendlela abantu abanokuchonga ngayo ngcono ishishini lam kwi-intanethi. Emva kwenyanga enye unokuba nedatha eyaneleyo yokwenza ulungiselelo olukhulu lweziphumo eziphilayo.
Epreli 4, 2012 ngo-10: 16 AM
Eyona ndlela ilungileyo isebenza kakuhle! Ngamanye amaxesha abaxumi bethu abasiniki olo khetho – kodwa sihlala sizama ukubathetha ngalo! Unokuvavanya amakhulu okanye amawaka eendibaniselwano ngePPC. Enkosi ngokudibanisa oko!